Idi China 3 ọjà siri ike Carbide Aluminom Ọgwụgwụ Mill dị iche iche mkpuchi Manufacture na Factory |Cheng
eriri Carbide na-adịghị ala
ala carbide mkpanaka
Otu Flute Al ọgwụgwụ igwe igwe
t oghere ngwụcha igwe ihe
Mills Ọgwụgwụ Tapered
eri ọgwụgwụ igwe
ezé ọka ngwụcha igwe nri
micro dayameta ọgwụgwụ igwe ihe
Carbide Reamer siri ike
carbide egwu egwu
Ngwa maka aluminom
Ihe ntinye carbide
Ihe ntinye na-emepe emepe/kewaa gbanyụọ ntinye
Ihe ntinye aluminom
HRC55 2 ọjà China AlTiN ọla mkpuchi mkpuchi bọọlụ e ...
HRC65 4Flute square ewepụghị blue nano mkpuchi Carbide ...
HRC45 4Flute Flat square ojii mkpuchi siri ike Carbide ...
Ọjà 3 siri ike Carbide Aluminom Ọgwụgwụ Mill dị iche iche mkpuchi
3 Flutes carbide ọgwụgwụ igwe igwe maka ịcha Aluminom, Aluminom Alloy, elu mma na ala price
Mgbidi ngwụcha Carbide siri ike maka AluminomỌzụ ahịa ahịa ugbu a na-aga n'ihu na-abawanye ojiji nke mkpụrụ osisi aluminom n'ichepụta igbutu na ịkpụzi.Mkpụrụ nke aluminom na-enye ọtụtụ uru, dị ka ike igwe dị mma na ezigbo ọkụ ọkụ, yana ịdị arọ dị arọ, na oke ike na-adị arọ.
Ahịa:D1x50L,exw 4.9usd/pc-6.9usd/pc (dị iche iche iche iche ego)
Mara amụma ọnụ ahịa karịa
Okwu mmeghe dị nkenke
Mgbidi ngwụcha Carbide siri ike maka AluminomỌzụ ahịa ahịa ugbu a na-aga n'ihu na-abawanye ojiji nke mkpụrụ osisi aluminom n'ichepụta igbutu na ịkpụzi.Mkpụrụ aluminom na-enye ọtụtụ uru, dị ka igwe mara mmae ikike na ezigbo ọkụ ọkụ, yana ịdị arọ na ịdị arọ, yana oke ike na oke ibu.
CY high gloss aluminum milling cutter series adopt home high-edu fine grain tungsten steel material, flexural ike: 4100mpa, ọka size: 0.6 μm, adịghị mfe imebi nsọtụ.A na-ewebata onye na-egwe ọka aluminom pụrụ iche nke nwere mkpuchi agba, nke na-abawanye nkwụsị nke onye na-egbutu ya.The pụrụ iche uzo imewe na polishing ọgwụgwọ nke n'ihu ọnwụ onu na uzo na-nakweere dịkwuo ọnwụ arụmọrụ.Ọ dị mma karịsịa maka ịrụ ọrụ nke ọma na elu gloss machining nke aluminum alloy (6 na 7 series aluminum) ihe.Site na njikwa mma dị elu, yana nyocha zuru oke, a na-ebuga igwe igwe ngwụcha usoro CY niile yana ọnụego ntozu 100%.
3F ALUMINUM NDỊ KWESỊRỊ NKWUO
D Ogologo ọjà Size Shank Ogologo Ogologo D Ogologo ọjà Size Shank Ogologo Ogologo
Igwe ihe igwe Carbide End maka Aluminom
3.Ihe: HRC45, HRC55
4.Made site na ụwa ọhụrụ 5-AXIS ngwá ọrụ egweri igwe, kwere nkwa àgwà na nkenke nke cutter.
5. A na-enyocha igwe igwe ngwụcha ọ bụla site na igwe na-enyocha Zoller na nyocha.
6. CY na-anabata nkọwapụta dị ka ihe ị chọrọ.
7. Mpempe ọrụ: imewe maka Aluminom pụrụ iche
N'ihi ịdị nro dị nro nke aluminom, a na-achọ njirimara pụrụ iche na geometries na igwe ihe njedebe carbide siri ike maka ịrụ ọrụ nke ọma nke ihe onwunwe ductile a.
elu-arụmọrụ carbide ọgwụgwụ nso nso na ezigbo ọjà geometry na-enye niile chọrọ atụmatụ maka elu-arụmọrụ machining nke aluminom, na agbakwunyere uru nke ukwuu ngwaahịa mwepụ ọnụego na elu na-agba na ndepụta, magburu onwe n'elu imecha àgwà, na ogologo ngwá ọrụ ndụ.
Ihe dị iche iche na-enye ohere maka ịmecha na imecha ngwa na aluminom na ihe ndị ọzọ na-adịghị ferrous ma na-asọmpi nke ọma na ugbu a zuru ụwa ọnụ na-emepụta ihe siri ike na-egbutu ngwá ọrụ carbide.
1.One AL njedebe igwe na ọkpọkọ plastik, agba agba nwere ike ịhọrọ ndị na-azụ ahịa njedebe.
2. Mbupu: ahịrị pụrụ iche / SF/TNT/DHL
FAQ & Kpọtụrụ Anyị
Ajụjụ: Gịnị bụ aha ika gị?
A: Akara anyị bụ CY, CY dị mkpụmkpụ nke Cheng Ye Co., Ltd.
Ajụjụ: Ị bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ nrụpụta?
A: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, tumadi dị na Zigong na Neijiang
Ajụjụ: Ị nwere ike ịnye nlele?ọ bụ n'efu ka ọ bụ extra?MOQ?
A: Ee, anyị nwere ike, mana ọ bụghị n'efu.Standard nkọwa si AL ọgwụgwụ igwe ihe MOQ bụ 1 ibe, na-abụghị ọkọlọtọ nkọwa si njedebe nke igwe ihe MOQ bụ 5 ibe.
Q: Ị nwere ike ịme OEM?
A: Ee, anyị nwere ike.CY nwere ike ime OEM maka njedebe niile.
Nke gara aga: HRC65 nano mkpuchi na-acha anụnụ anụnụ Tungsten Carbide Corner Radius End Mills Metal na-arụ ọrụ igbutu ngwaọrụ.
Osote: Solid Carbide Metal China mkpuchi TiSiN 4 Flute Roughing End Mills
3F igwe ihe igwe
Al ọgwụgwụ igwe
Aluminom ọgwụgwụ igwe igwe
HRC45 Al ọgwụgwụ igwe
HRC45 igwe ihe igwe
HRC45 4Flute Flat square ojii mkpuchi siri ike Ca ...
HRC45 Carbide 2 ọjà ọkọlọtọ ogologo bọl imi ...
HRC45 3F Aluminom carbide ọgwụgwụ ihe igwe ihe igwe
HRC45 4 ọjà ọkọlọtọ ogologo ogologo radius njedebe ...
ChengYe co., ltd na-ezo aka dị ka "CY", ya isi ngwaahịa bụ carbide mkpara, carbide ọgwụgwụ Mills, carbide inserts, carbide burrs, carbide drills, reamers, ọkọlọtọ na ndị na-abụghị ọkọlọtọ .Ozokwa, anyị nwere ike inye ndị ahịa na ngwá ọrụ mmezi .
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị, biko hapụ ozi kọntaktị gị, anyị nọ n'ịntanetị 24 awa.
Nwebiisinka © 2022 Nbudata data ikike niile echekwabara.
Ngwaahịa naekpo ọkụ
Carbide Burrs China Milling Cutter China Ball End Mill Onye naegbu nri Ngwá ọrụ Carbide Ngwa lathes